Madaxweynaha Soomaaliland oo la kulmay Madaxweynaha dalka Jabuuti - Awdinle Online
Madaxweynaha Soomaaliland oo la kulmay Madaxweynaha dalka Jabuuti
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga dalka Jabuuti ayaa kulan la qaatay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle oo qasriga madaxtooyada Jabuuti ku qaabiley.
Madaxweynaha Jabuuti iyo Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa ay ka wda hadleen danaha labada dhinac, adkaynta xiriirka ka dhexeeya labada dhinac iyo isu-socodka arrimaha bulshada. Waxa kale oo kulankaasi lagu soo qaatay sidii horeba ay labada dhinac isaga kaashan jireen ka war haynta iyo la socodka arrimaha nabadgelyada.
Ugu danbayn Safarka Madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisu ay ku joogaan Dalka Jabuuti ayaa ah safar shaqo oo qaadan doona maalmo, iyaga oo halkaasi kulamada kasii wadi doona.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhawaan safar ku tegay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isaga oo la kulmay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, iyaga oo kala saxiixday heshiis ka kooban dhowr qodob.
Previous articleCumar Filish oo ka digay in qalqal siyaasadeed & mid amni laga abuuro Muqdisho.
Next articleCiidamo ka wada tirsan dowladda oo ku dagaalamay Muqdisho & khasaaro ka dhashay